Mamaha Ny Olan’ny Olom-pirenena Ny Bilaogy · Global Voices teny Malagasy
Mamaha Ny Olan'ny Olom-pirenena Ny Bilaogy
Voadika ny 13 Oktobra 2017 3:52 GMT
(Marihina fa tamin'ny 21 Jolay 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Mandeha amin'ny lalambe faran'izay mafy ianao (120km / ora), miresaka amin'ny namana iray, tony. Tampoka teo dia nisy bisy fitateram-bahoaka iray nandeha mafy nihoatra anao ka nampanontany tena anao hoe: fa firy ny hafaingam-pandeha an'izany bisy izany? Ary nanapa-kevitra ny hanaraka ilay bisy ny mpamily.
Nitantara ny zavatra hitany i Carlos Verdugo (ES) : ” Teo anelanelan'i Tongoy sy Los Vilos ara-bakiteny izahay, miaraka amin'ny hafainganam-pandeha mafy indrindra azon'ny fiara atao, raha nisy tselatra matevina nipoitra sy handalo anay, ary nanontany tena izahay hoe: Vorona ve iny? Tsia, fiaramanidina ve? Tsia ilay superman ve? Tsia, fa i Ramos Cholele (orinasa fitateram-bahoaka ao amin'ny faritra) “.
Nanohy izy nilazalaza fa nanaraka ilay bisy mba hamantaran'izy ireo ny hafaingam-pandehany. 170 km /ora. Tsy nifarana hatreo ny tantara. Nalain'izy ireo sary tamin'ny finday izany ary navoakany antserasera, ka nahatonga fanehoan-kevitra maherin'ny 60 izay nizara ny olana. Nandefa momba izany ihany koa ny El Morroccotudo (ES), gazety tranonkalan'ny bilaogy avy ao amin'ny faritra .
Noho izany, nangataka fahazoan-dàlana tamin'izy ireo hampiasa ilay lahatsary ireo sehatra fampitam-baovao isankarazany.
Tao anatin'ny herinandro vitsy lasa izay, nahatonga ny lehilahy iray hanangana ny bilaogy (ES) ho an'ny fanehoany ny ahiahiny mikasika ny heloka bevava ao Shily ny fandrobana trano iray. Nikarakara fitokonana nasionaly ireo mpianatra tamin'ny alàlan'ny bilaogy sy ny bilaogin-tsary. Nanangana bilaogin'ny vondrom-piarahamonina sy ny pejin'ny tranonkala ireo faritra manodidina izay nitaky ny famotsorana ilay lehilahy tsy manan-kialofana sy mba handefasana ny vaovao . Ny herinandro lasa teo, nanao fanentanana ny bilaogera ho an'ireo niharam-boina tamin'ny tondra-drano tany atsimo. Manana mponina miisa 16 tapitrisa i Shily. Noho izany, mety ho valinteny isan'andro izany ho an'ny firenena hafa, fa ho antsika kosa dia fomba iray hanitsiana ny fampitam-baovao amin'ny olana ara-tsosialy.
Na dia mbola tsy rototra amin'ny fananganana bilaogy sy teknolojia hafa aza ny fampahalalam-baovao Shiliana , dia efa nanomboka nampiasa izany ny mponina, ary nanomboka tsikelikely ireo bilaogy natao ho loharanom-baovao izay nosahanin'ny fampitam-baovao nentim-paharazana hatramin'izay.